June 2021 - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UBayanda Nxumalo, umsunguli weNtwenhle’s Every Occasion, ebhaka amakhekhe, ihlanganise nezipho, yaseThekwini, KwaZulu-Natali
INYANGA yentsha siyisonga ngomuntu omusha osanda kusungula ibhizinisi lamakhekhe elihlukile njengoba lihambisana nezipho. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
ULULEKWE wuyise ukuthi akangapholisi maseko ngokuqala ibhizinisi ngoba usezibonile ukuthi unothando lwalo. Le ntokazi isilandelile lesi seluleko njengoba isinenkampani ethi yona nakuba ineminyaka ewu-17.
Isiqubu sesithathu seCOVID-19 siyingozi kodwa kusamele siphokophele ukubhekelela zonke izinhlangothi, kuloba uBusi Mavuso
IMPI yobhubhane iCOVID-19 iyonqotshwa ngokuthi kugonywe abantu ngokushesha. Ngesonto eledlule umNyango wezeMpilo nobambisene nabo bakwazile ukunyusa amasokisi kulolu hlelo futhi ngiyabancoma.
Umthetho wobunikazi ebhizinisini nezinto ezikuthintayo, kuloba uNtokozo Biyela
KULE ngosi ngifisa sibheke indaba yomthetho wobunikazi kwezamabhizinisi, phecelezi i-intellectual property law.
Intsha ingenisile kwezolimo
Kusasa sisonga iNyanga yeNtsha. SiwuMbele kwiSivuno namuhla sibungaza intsha eyenza ezibukwayo kwezolimo. Lena yintsha esesike sabhala ngayo.
Imboni yezolimo ibanzi futhi miningi imisebenzi ekhona kuyona, ngale kokulima emasimini abaningi abaye bacabange ukuthi kuphelela khona. Masonto onke sibhala ngabalimi abasebancane. Izindaba zabo ziveza ukuthi yimboni ebanzi nenamathuba amaningi.
UNks uLindelwa Ndaba, i-development officer eKwaZulu-Natal Agricultural Union
Zimbili izinto eziseqhulwini emsebenzini wakhe. Okokuqala wukuqeda igama elithi abalimi abasafufusa kuthi okwesibili kube wukukhiqiza abalimi asebesimeme. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
UQASHELWE ukusebenza nabalimi abasafufusa njengoba kumele abatholele amathuba nezinye izinto ezingabasiza. Kodwa isifiso sakhe esikhulu wukuthi mhlazane eshiya kulo msebenzi kube wukuthi akasekho umlimi okuthiwa usafufusa ngoba lokhu kubuye kusetshenziswe ngisho kungafanele.
UNksz uSinethemba Ngoako, umlimi waKwaNtunjambili, eKranskop, eKZN
Liyasimama ibhizinisi lo mlimi omncane okhethe ukusebenzisa umhlaba owashiywa uyisemkhulu ngenkathi izwe livaliwe. Uxoxe noNOKWANDA NCWANE
UKUNTENGA komnotho nezinga eliphezulu lokudilizwa kwabantu emsebenzini ngenxa yokuvalwa kwezwe kumgqugquzele ukuthi aqale ibhizinisi lomndeni lokulima.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngomthetho wesibambiso uma ukweletwa, i-lien
UNkk uQinisile Mnqayi, umsunguli weQuetee Boutique neBlackwood Bakehouse kwaseRichards Bay, KwaZulu-Natali
Wadela imali yokuya eholidini nomndeni, wancamela ukuthenga isitoko ongene shi emabhizinisi ehlukene. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UFUNDE ukuba wumholi esakhula njengoba ethi ukuba yingane yokuqala kwenza ukuthi abazali bakhe bangamtotosi kusukela eneminyaka eyisikhombisa.
UMnu uKganki Matabane, isikhulu esiphezulu seBlack Business Council
Kukho konke akwenzayo ugqugquzelwa wukuletha uguquko ezinhlakeni zomnotho njengoba ethi umthetho weBEE uyabatotosa labo okumele badedele amatomu omnotho. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngeBEE, ubuholi nokunye
ESEPHOTHULE umatikuletsheni wathola itoho lokuba wumabhalane nelokuba wuthisha ukuze ezoqongelela imali yokuya enyuvesi. Kubangani bakhe abase bevele besenyuvesi kukhona ababemxoxela ngendlela i-Accounting elikhuni ngayo futhi babethi akekho ophothula iziqu zakhona ngesikhathi esibekiwe okuyiminyaka emithathu.
UNkk uZandile Khambule, umsunguli we-Unjani Riverview Clinic, umtholampilo ozimele KwaZulu-Natali
Unomtholampilo othi yena owayehlushwa wukubona abantu bengasizakali kahle ngenxa yokugcwala ezikhungweni zezempilo. Uxoxe noZIMBILI Mazibuko
UTHANDO lokunakekela abantu abagulayo nokukhathalela iziguli yilona olwaqala uthando lokugxila kwezempilo esemncane.
UNksz uNokuzola Cele weZEMUMC MaShabs Coffee Shop yaseMhlanga, eThekwini, KwaZulu-Natali
Uvuke wazithatha ngokudayisa amagwinya ezindaweni zomntakabani odlondlobalayo kwezamabhizinisi. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
KWAKUYIVELAKANCANE ukuthengwa kwesinkwa kubo ngenxa yokuthi uninakhulu owamkhulisa wayevele axove inhlama kwenziwe amagwinya nojeqe.
UMabuza ubeyinxusa lobumbano losomabhizinisi, kuloba uBonang Mohale
UDkt uJabulane Albert Mabuza ubewumphathi wami! Samncenga, wagcina evumile ukuba yinxusa losomabhizinisi bonke ngokuba wumengameli weBusiness Unity South Africa (iBUSA), weCEOP Initiative nosihlalo weBusiness Leadership South Africa (iBLSA).
UNkk uZama Ngcobo, umsunguli weZanothando Natural Cosmetics nebhizinisi lokukhanda izicathulo
Usenza izinto ezihlukene okhuthazwe wukufuna isisombululo ezinkingeni abehlangabezana nazo. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UKUNGAKUTHOLI okokugcoba okufanele isikhumba sakhe kwaholela ekutheni agcine eseqala ibhizinisi lokuhlanganisa amafutha ngoba ebheka isimonyo esimfanele.
Sife olwembiza ngokudlula emhlabeni kukaMabuza, kuloba uBusi Mavuso
NGOMSOMBULUKO sivalelise enye yezingqalabutho zamabhizinisi, neyake yaba wusihlalo weBusiness Leadership South Africa (iBLSA), uMnu uJabu Mabuza. UMabuza usize ukuthi osomabhizinisi babe nezwi ngesikhathi sokugwamandwa kombuso.
Ubhekana kanjani nokuqondiswa kwezigwegwe, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngithanda sibheke ukuthi uwusomabhizinisi ubhekana kanjani nendaba yamacala enkampanini yakho. Yiziphi izinyathelo okumele uzilandele uma kunecala ukuze liphathwe ngendlela efanele?
UMnu uNkosinathi Makamela, umlimi waseDutywa, eMpumalanga Kapa
Ukhamba lufuze imbiza kohamba ezinyathelweni zabazali bakhe osewumlimi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UKUKHULISWA ngabazali abangabalimi futhi befuyile yikona okumenze washisekela ukuba wumlimi.
UMnu uMpumelelo Zikalala ehlaziya isinqumo senkantolo esithinta umhlaba weNgonyama Trust
UMnu uNkanyezi Msomi noMnu uSakhile Mazibuko abasunguli beKick It Clean yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Bahlanganiswe wubungani, nokuthe uma kufika umqondo webhizinisi banquma ukulisebenza ndawonye. Manje basezinhlelweni zokuvula amagatsha ezweni lonke. Omunye wabo uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UBUNGANI babo nothando lwezinto ezifanayo yikona okwenze ukuthi izinsizwa zaseThekwini zisungule ibhizinisi lokuwasha nokunakekela amateku nezicathulo elikhula ngamandla.
UMnu uTsietsi Ngobese, isikhulu esiphezulu seWeSolve4x Consultancy yaseSandton, eGauteng
Lolu qweqwe lukasomabhizinisi lufakazela isisho esithi ubudoda abukhulelwa. Nakuba esemncane kodwa uwumakadebona emkhakheni wamabhizinisini. Uxoxe noLANGA KHANYILE ngohambo lwakhe
KUNEZINTO ezimbalwa eziqapheleka ngesikhulu esiphezulu senkampani egxile kumshwalense nezemfundo. Okokuqala wukuthi ibhizinisi lisegazini kuye. Okwesibili wukuthi unothando lwento ayenzayo. Okwesithathu, nokumqoka, wukuthi uyivulandlela endleleni yokuphatha ibhizinisi, phecelezi i-innovator. Okokugcina wukuthi uyakholelwa emandleni abantu abamnyama ebhizinisini.
OSOMABHIZINISI babhonge emswaneni ngokudlula emhlabeni koqweqwe lukasomabhizinisi uMnu uJabu Mabuza, othathwe yiCOVID-19. UMabuza uphathe izinkampani ezinhlobonhlobo njengoba ebewusihlalo we-Eskom kanti wake waba ngusihlalo weTelkom
UMKHIQIZO wokuthengwa kwempahla ukhuphuke ngo-95.8% unyaka nonyaka ngo-Ephreli ngemva kokwehla ngo-2.3% ngoMashi. Loku kunyuka mawala kungenxa yokuthi ukuthengwa kwempahla kwakwehle kakhulu ngo-Ephreli ka-2020 njengoba izwe lalivaliwe ngokwesigaba sesihlanu ngenxa yeCOVID-19
I-COMPETITION Tribunal iqinisekisile isinqumo sokuthi kufanele kuphele ukuthi uPick n Pay ube nezivumelwano ezithi kumele kube yiwona kuphela isitolo sokudla lapho isuke iqashe khona enxanxatheleni yezitolo. Loku kwaba ngesinye seziphakamiso zeGrocery Retail Market Inquiry
UNkk uNonkululeko noMnu uSydwell Phokane, abasunguli beMyCB Cleaning Hub yasePitoli, eGauteng
Ukuba ngamaqhathanzipho kuzalele abashadile ibhizinisi eselinabele eNingizimu Afrika yonke. Omunye wabo uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
INHLANZEKO yinto ekhuthazwayo ebantwin nasemakhaya. Yiyona le mfundiso eholele ekutheni abashadile basungule ibhizinisi eligxile enhlanzekweni.
UQWEQWE lukasomabhizinisi, umholi kwezamabhizinisi nesishoshovu sangoJuni 16 ngo-1976 sishone ngoSuku lweNtsha. UMnu uJabu Mabuza, obeneminyaka ewu-63, ushone ngenxa yeCOVID-19, esiphinde yaqubuka okomlilo wequbula njengoba kunesiwombe sayo sesithathu ezweni. UMshengu kukude … Read More
UNksz uNozipho Nala weNozie Creations yaseThekwini, KwaZulu-Natali, eyenza imidwebo yasodongeni
Ugqugquzelwe wukufisa ukwenza into ehlukile esungula ibhizinisi lezithombe zokuhlobisa odongeni. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UCWANINGO alwenza ngenkathi ezihlupha ngokuthi yini ehlukile angayenza ukuze aziphilise yilona olwamfikisela ngomcabango wokuqala ibhizinisi lokupenda imidwebo yezithombe zokuhlobisa odongeni.
UDkt u-Alex Mashilo okhulumela iSACP, eshaya amakhala ngesimemezelo sokudayiswa kuka-51% weSouth African Airways
Kunabashaya amakhala ‘ngokudayiswa’ kuka-51% weSAA kodwa usomnotho uthi amaphaphu phansi, iseyinde indlela. USLINDILE KHANYILE uyabika
KWABA nemvunge ngo-Okthoba nyakenye ngenkathi uNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni ememezela ukuthi uhulumeni uzophinde ulekelele inkampani yamabhanoyi ngemali.
UNksz uPalesa Motaung, i-operations manager yase-AgriKool esiza abalimi abasafufusa nabadayisi abanamatafula
Basebenzisa ulwazi lwezolimo, ezemvelo nomhlabathi ukusiza abalimi abasafufusa nabadayisi basemgwaqweni. USLINDILE KHANYILE uxoxe nomunye wabo
LANGA limbe esafunda isikole samabanga aphezulu eduze kwalapho ayefunda khona kwakwakhiwa inxanxathela yezitolo entsha eduze omfula.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngokuqiniswa komthetho olawula ubugebengu obenziwa ngobuchwepheshe, i-Cybercrimes Act
UNksz uNono Mtyide, umnikazi weLet’s eat with CNono
Uneminyaka ewa evuka nezinhlobo zamabhizinisi osegcine ekutholile okumvumayo njengoba ene-curry paste ethi yena. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
AKUKAPHELI sikhathi esingakanani luzelwe “usana” lwakhe olusha kodwa selwaziwa emadolobheni amaningi eNingizimu Afrika kanti naye usaziwa njengo“Babes we-curry paste” ngenxa yokuthengwa ubuthaphuthaphu kwe-curry paste azihlanganisele yona.
UMnu uMafka Mazibuko, usomabhizinisi waseThekwini, KwaZulu-Natali
Uwumakadebona emabhizinisini njengoba esesungule amabhizinisi emikhakheni ehlukene. Manje usesabalalele kwezokuvakasha. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO ngohambo lwakhe
ESAQASHIWE wayesebenzela isikhondlakhondla esikhiqiza izimpahla ezinhlobonhlobo ezisetshenziswa ngabathengi, i-Unilever. Kodwa nangaleso sikhathi wayazi ukuthi ngelinye ilanga uyophuma ayozimela ngoba uthando lokuzisebenza lwaqala esemncane.
UMnu uTshepo Mahloele, usihlalo weTakatso Consortium ezotakula iSSA
Izithombe: wuGoogle noTshepoMahloele.com
Kumenyezelwe abazovuselela iSAA inkampani kahulumeni ebisiphila ngokutakulwa
UHULUMENI usuqoke iTakatso Consortium njengenkampani ezimele esizobambisana nawo ukuvuselela inkampani yamabhanoyi iSouth African Airways (iSAA). Lesi simemezelo sisho ukuthi u-51% weSAA usuphethwe yinkampani ezimele. Le nkampani ihlanganiswe yiHarith General Partners, … Read More
SEKUQOKWE uMnu uVonani Chauke njengePhini loMcwaningimabhuku-Jikelele. UChauke uzoqala kulesi sikhundla mhla ka-1 ngoJulayi. Uvala isikhala esivuleke ngokuqokwa kukaNksz uTsakani Maluleke osewuMcwaningimabhuku-Jikelele. UChauke, oyi-chartered accountant, uqhamuka kwaDeloitte kanti unesipiliyoni seminyaka engaphezu kwewu-23 ekubeni wumcwaningimabhuku.
I-DURBAN Chamber of Commerce and Industry isincome isinqumo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokubuyekeza umthetho olawula ugesi, i-Electricity Regulation Act. Isimemezelo sikaRamaphosa sithi abaphehli bakagesi abazimele, njengezimayini, sebezovunyelwa ukukhiqiza ugesi ofinyelela ku-100MW futhi bazovunyelwa ukuwudayisa. Le nhlangano yosomabhizinisi ithe ikholwa wukuthi loku kuzokhulisa umnotho.
IBOIPELO Mining Contractors iqokwe ukuthi ihlinzeke ezokumbiwa phansi e-Arnot Coal Mine eMpumalanga. Ngalesi sivumelwano izokhokhelwa uR3.2 billion. IBoipelo yinkampani ehlanganiswe yiMurray & Roberts ne-Amandla TM. Umsunguli we-Amandla TM wuMnu uCharles Makgala.
UNkk uThembeka Nxumalo, umsunguli weThat’s the Cake yaseThekwini, KwaZulu-Natali
UQALE ukubhaka ngoba echitha isizungu emva kokungawutholi umsebenzi eseqede ukuqeqeshwa. Wayenzela umndeni nabangani bakhe nobekuthi uma bemncoma bavele bamkhuthaze ukuthi akawadayise amakhekhe ngoba ehla esiphundu. Kodwa waqale wanganaka. Kuthe uma … Read More
UKUWA komnotho emhlabeni ngo-2008 okwadalwa wukwehla kwamanani emkhakheni wamabhilidi nezindlu nokuhluleka ukukhokha izikweletu kwabantu base-USA kwazwela naseNingizimu Afrika. Imibiko yaveza ukuthi bawu-1 million abantu abaphelelwa wumsebenzi ngenxa yaloku kuwa komnotho … Read More
UNkk uZanele van Zyl, umpheki nomnikazi weCooking with Zanele
Owasukumela uthando lwebhodwe ngoba ehlulwa wumyeni wakhe ekhishini usengomunye wabapheki nosomabhizinisi abathandwayo ezweni. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
SENIDLILE kodwa? Lona wumbuzo osudume iNingizimu Afrika yonke ngenxa kasomabhizinisi nompheki ongaconsi phansi kwabaningi.
UMnu uThanda Sithole, usomnotho waseFNB, uthi kunethemba ngokukhula komnotho
Kuntwela ezansi ngokuvuseleleka komnotho kodwa ukucinywa kukagesi kuyayikhinyabeza le mizamo. USLINDILE KHANYILE uyabika
KUNEZIMPAWU eziletha ithemba ngokuvuka komnotho eNingizimu Afrika kodwa ukuqhubeka kokucinywa kukagesi kuyalishabalalisa leli themba ngoba kubonakala ukucinywa kukagesi kuyinto esazoqhubeka. Lona wumbono wongoti abaphawula ngezibalo ezisanda kukhishwa yiStatistics South Africa, … Read More
UNkk uThobeka Ndlovu, umsunguli weCareer Hotspot
Inkampani yakhe ixazulula inkinga yokuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UTHANDO lokusiza abantu ngolwazi lwaqala esemncane ngoba ebona ukushoda kolwazi emiphakathini yabantu abamnyama.
Akukhushulwe amasokisi ngokuguqula umnotho, kuloba uSandile Zungu
NGO-EPHRELI besigubha iminyaka ewu-27 sathola inkululeko neminyaka ewu-25 kwasayinwa umthethosisekelo wethu. Kodwa umsebenzi wokuguqula umnotho owawuqalwe njengengxenye yesivumelwano sezepolitiki ubonakala uhlehlela emuva.
Wenzenjani uma ulungiselela inhlolokhono yomuntu ozomqasha, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngithanda sibheke ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe uma wenza inhlolokhono yomuntu noma abantu ofisa ukubaqasha enkampanini yakho.
UDkt uSiphe Zantsi, ungoti wezolimo osebenza eSwiss Institute eSwitzerland
Owayenephupho lokuba wumlimi wenza ezibukwayo kulo mkhakha e-Europe, lapho esezinze khona. Uxoxe noSINESIPHO TOM
USALOKU emangale njalo uma eqhathanisa izinga asekulona emkhakheni wezolimo nempilo akhule ngaphansi kwayo eNingizimu Afrika osewumcwaningi emkhakheni wezolimo eSwiss Institute eSwitzerland.
Ingqayizivele yethu kubalimi abancane kowomlimi omncane ovelele
KUKHUTHAZWA abalimi abayintsha ukuthi bangenele umncintiswano womlimi omncane ovelele i-Agri SA National Young Farmer of the Year.
UMnu uMpumelelo Zikalala uhlaziya ngezinye izinto eziqukethwe yisiphakamiso sokubuyekeza imishado eNingizimu Africa
UMnu uMcMillan Masoka, umsunguli weBasani Cleaners, ehlanza izakhiwo
Uwise amabhizinisi amathathu kodwa akangaphela amandla njengoba kuhamba kahle kwelesine. Manje usenabela eezweni lonke. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
KUSUKELA ngo-2006 kuze kube wu-2016 uvule futhi wawisa amabhizinisi amathathu. Emva kokuwa kwelesithathu, kwavaleka nenhlanhla yokuthola umsebenzi ebiyaye imtakule ngezinye izikhathi uma esewise ibhizinisi.
UMnu uDiphete Bopape, umakadebona womlobi, umshicileli nesishabasheki solimi saseLimpopo
Izithombe: wuLucas Ledwaba
Ukubona unina ehluphekela ukuthola incwadi yolimi lwebele angayifunda kwamkhuthaza ukuthi kungabi yiBhayibheli nezincwadi zesikole kuphela okubhalwe ngolimi lwakhe. Uxoxe noLUCAS LEDWABA ngohambo lwakhe
UMLOBI, umsunguli wephephandaba nesishabasheki sezilimi zomdabu sikholwa wukuthi nakuba ubandlululo lwaluyinto embi kodwa lwalunakho okubili okuthathu okuhle.
AM Wrap Wrap
UMCWANINGIMABHUKU-jikelele waseNingizimu Afrika uNksz uTsakani Maluleke uthi ukhathazekile ngokuboshwa komunye wezisebenzi zaleli hhovisi eGauteng esolwa ngenkohlakalo. UNksz Maluleke uthe izinsolo ezibekwe lesi sisebenzi ngeke bazithathe kancane. Uthe bakhathazekile futhi baphoxekile kakhulu ngokwenzekile. Uthe akuhambisani nendlela yokuziphatha abayilindele kwizisebenzi zabo. Uthe balindele ukuthi zonke izisebenzi zabo ziziphathe ngendlela efanele futhi zihloniphe umsebenzi, ngakho-ke ubugebengu abamukelekile kanti kumele badedele umthetho wenze umsebenzi wawo. Ngokwemibiko, enye yezimenenja ehhovisi lomcwaningimabhuku eGauteng izame ukugwazela isikhulu sehhovisi lomNyango wezaseKhaya kade iyofaka isicelo se-passport.
I-SHOPRITE iphothule ukudayisa izitolo ebinazo eNigeria njengoba zonke izidayisele iKetron Investment Holdings, engaphansi kwePersianas Investment Limited. Lesi sivumelwano sifaka naleso se-franchise nokusho ukuthi le nkampani yaseNigeria izokwazi ukuqhubeka isebenzise igama elithi Shoprite ezitolo zayo. AbakwaShoprite sebekhokhelwe u-70% wemali kanti esele izokhokhwa ngamancozuncozu izinyanga eziwu-30.
I-SANTAM isimemezele ukuqokwa kukaNksz uNombulelo Pinky Moholi njengosihlalo omusha webhodi layo. Uthatha izintambo kuMnu uVusi Khanyile, osethathe umhlalaphansi. UNksz uMoholi uzoba nawusihlalo we-Nominations Committee nelungu lekomidi elibhekele ezakwandabazabantu nelinquma imihlomulo.
I-AFRICAN Media Entertainment ithi imali engenile ngonyaka wezimali ophele ngoMashi 31 yehle ngo-24% yaba nguR200.1 million, nokuyizinkomba zesimo somnotho esinzima nesibangwe kakhulu wukubheduka kweCOVID-19. Inzuzo yehle ngo-97% yaba wuR282 000. Inzuzo engena ngesheya yehle ngo-97.3% isuka ku-130.4c, yafinyelela ku-3.6c. Le nkampani ingabanikazi bemisakazo efana ne-Algoa FM neziko lezindaba zamabhizinisi i-Moneyweb.
I-VISUAL International Holdings isiqoke uNkk uZanele Mbokazi-Nkambule njengomunye wabaqondisi bebhodi layo. Le nkampani ethuthukisa izakhiwo iqale ukuhweba eJSE ngo-2014. UNkk uMbokazi-Nkambule uwusomabhizinisi nosaziwayo oneminyaka engaphezu kwewu-20 esebenza emkhakheni wezokusaza, izindaba nokuxhumana. Waqala ukwaziwa ewumsakazi kuKhozi FM kanti kusukela ngo-2001 usungule inkampani yakhe iMirror PR & Events, neyenza nemicimbi efana namaCrown Gospel Awards. Une-BA Honours yase-University of Natal, esibizwa nge-UKZN.
ISIZULU sithi umthente uhlaba usamila. Intombazane yaseThekwini esibhale ngayo kwaSafufusa ngesonto elidlule iyasifakazele lesi saga. USiphesihle Mhlongo, odume ngelikaSippy, unebhizinisi lokupheka nokubhaka kanti ufundisa ezinye izingane ukupheka nokubhaka. U-Sippy, oneminyaka … Read More
UMnu uSibusiso Makhathini, umsunguli weSbu’s Maths Project
Owayefeyila izibalo namhlanje usenebhizinisi elikhiqiza abafundi abaphasa lesi sifundo ngamalengiso. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
IZIBALO yisifundo abantu abaningi abangasithandi ngoba bathi kunzima ukusiphasa. Kodwa kunensizwa ethanda lesi sifundo kangangokuthi isisungule ibhizinisi lokwenza abantu ukuthi basithande.
UMengameli uCyril Ramaphosa edlulisa itayitela kubalimi eGroblersdal, eSekhukhune, eLimpopo
Ziseningi izinselelo ezinqinda ukukhula kwabalimi abamnyama njengokungatholi amatayitela ngesikhathi nokungaxhaswa ngendlela efanele uma sebebuyiselwe umhlaba. USILINDILE NYATHIKAZI uyabika
YIZE umNyango wezoLimo, ukuBuyiswa koMhlaba nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya usubuyisele u-50% womhlaba kahulumeni ukuthi ulinywe kodwa ukwesekwa kwabalimi abasha nokudluliselwa komhlaba ngokupheleyo kusazoba yizinto ezisazomhlupha ungqongqoshe walo mnyango.
KUYINTOKOZO enkulu kuMbele ukumemezela isivumelwane sethu noLindo Makhaye weLusizo Group owethula uhlelo oluthi Notha Ujule Ngezamabhizinisi emsakazweni uKhozi FM kusukela namhlanje. Ngalesi sivumelwane kusho ukuthi osomabhizinisi esibhala ngabo engosini Asafufusa basethubeni lokuthi amabhizinisi abo kukhulunywe ngawo kulolu hlelo kulesi sikhondlakhondla somsakazo.
Vula umqondo uma udinga ukuxhaswa ebhizinisini, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngithanda sibheke ukuthi yiziphi ezinye zezingqinamba ezenza ukuthi abantu abaqala amabhizinisi bangakutholi ukuxhaswa abakufunayo.
Abatshalimali asingabadidi ngemithetho ebuye iziphikise yona, kuloba uBusi Mavuso
UDABA lobunikazi bempahla lubuye libe yibhola lomnqakiswano losopolitiki eliqhatha abacebile nabantulayo. Ngenkathi siphikisana ngezinto kulula ukuthi sikhohlwe yiqhaza lamalungelo ukuthi izinto zisungulwa kanjani, hhayi ukuthi zabiwa kanjani.
UMnu uSihle Magubane, umsunguli weSihle’s Brew yaseGoli, eGauteng, eyenza ikhofi
Uwumuntu wokuqala omnyama onekhofi lakhe kanti usengenise ngamandla ezitolo zokudla ezweni lonke. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
WAQALA evubela ikhofi esebenzela enye yezinkampani ezihamba phambili ekukhiqizeni ikhofi kanti manje usenekhofi elithi yena. UMnu uSihle Magubane usizwe wukubekezela ngenkathi elinde izinto ukuthi zihlangane njengoba esenekhofi lakhe iSihle’s Brew, nokuyikhofi lokuqala lomuntu omnyama eNingizimu Afrika.
UNksz uLindelwa Ndaba, i-development officer yeKwaZulu-Natal Agricultural Union
Ungoti wezolimo ucije intsha ngamathuba akhona emkhakheni wezolimo. USIMANGALISO NTSHANGASE uyabika
ULWAZI olunzulu, amacebo nakho konke okudingekayo ukuze ukwazi ukungena kwezolimo ngezinye zezinto ezihlabahlosile ezigqame esigcawini sokuqala sokucijana ngolwazi ngamathuba akhona kule ndima.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngesiphakamiso sesithembu sabantu besifazane